Stainless Steel Mamariparitra ravin sy varahina Mamariparitra Studs, Bronze Mamariparitra ravin - JBP
Sampana iray isika tafangona sy JBP GROUP (HK) CO., Voafetra ihany. Maherin'ny 16 taona manan-karena traikefa tamin'ny fanaovana tondro ambonin'ny tany azo tsapai-tanana sy ny CNC machined vy vokatra. Ny tsena lehibe indrindra dia mandalo Aostralia, Nouvelle-Zélande, Japana, Etazonia, Alemaina, Frantsa sy ireo firenena eoropeanina. Isika efa mandroso nomena fitaovana sy ny mahafeno fepetra ara-teknika mpiasa miantoka antsika avo lenta R & D fahafahana.
Ara-nofo ny vokatra dia ahitana: Marina Grade Stainless vy, varahina, varahina, aliminioma, fanitso firaka sy ny tontolo iainana-namana fingotra sy ny plastika.
Ny predominance ny orinasa lainga toy izao manaraka izao:
1, izahay 16 taona manan-karena traikefa eo amin'ny mpanamboatra vy amin'ny faritra nitarika R & D fahafahana. Ny tsena lehibe no Eoropa, Amerika Avaratra, Aostralia sy Azia. Afaka manome vokatra tsara eo an-toerana araka ny lalàna sy ny fitsipika.
2, Efa teo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa maro rantsana erantany mafy maro nandritra ny taona maro. Misy 20 taona mahery za-draharaha teknisianina mahalala tsara ny momba ny entana. Noho izany dia afaka manome toky anao fa izahay dia afaka manome vokatra tsara lahateny miorina amin'ny fifadian-kanina.
3, ny mahafeno fepetra injeniera ao amin'ny orinasa afaka manoro hevitra anao soso-kevitra sy vaovao ho an'ny sasany, raha ilaina tetikasa natao. Isika amin'ny planina tsara sy mahafantatra tsara ny momba ny fampiharana ny tena vokatra.
4: Tsy misy fanafarana sy fanondranana license.
5, Misy miovaova maro ny zana-mpiantoka, izay manome antsika zavatra hafa ny sasany fitaovana.
Ny orinasa dia tanàna ao amin'ny Cixi, ny farany atsimo amin'i Hangzhou Bay Bridge, izany hoe ny tetezana lava indrindra ambonin'ny ranomasina. Izany dia iray ihany ary antsasak'adiny avy any Pudong Airport sy ny 1 ora avy any Xiaoshan Airport, antsasak'adiny avy any Ningbo Airport ho an'ny orinasa ny fiara. Raha avy hitsidika antsika, dia mifandraisa antsika noho ny mitsimpona.
Tokony ianao manana fanontaniana, masìna ianao, aza misalasala mifandray aminay.
TGSI-010 Stainless vy azo tsapai-tanana studs / warnin ...
TGSI-018 Stainless vy azo tsapai-tanana esory / directi ...
Nohitsakitsahiko faritra / CNC tsy laniny faritra / Sheet Meta ...
TGSI-006 Stainless vy azo tsapai-tanana studs / warni ...
Fingotra faritra / novolavolaina fingotra faritra / koronosy ru ...